Maqaal: Maxaa loo aflagaadeeyay wasiirka? | Jubbaland Media Online
Maqaal: Maxaa loo aflagaadeeyay wasiirka?
Posted on April 16, 2016 in Feat, Opinions, Wararka // 1 Comment
12-kii bishan ayuu TV-ga Jubbaland baahiyay muuqaal laga soo duubay degmada Luuq ee gobolka Gedo, waxuuna ku saabsanaa shir jaraa’id oo uu qabtay gudoomiyaha degmada Luuq mudane Bishaar Aadan Cabdikariim. Gudoomiyaha oo ku labisan dareeska ciidamada isla markaana ay hareerihiisa ka muuqdaan askar hubeysan ayaa si adag u weeraray wasiir ku xigeenka wasaaradda arimaha gudaha Jubbaland mudane C/rashiid Janan, waxuuna ku tuhmay in uu ku soo xadkudbay deegaano hoostaga maamulkiisa oo ah degmada Luuq. Gudoomiyaha oo baaq u diray madaxda Jubaland ayaa wasiirka ku tilmaamay shaqsi uusan sharciga qabanin, isaga oo ku goodiyay in hadii uu dagaal ka qarxo deegaanadaas uu Cabdirashiid Janan qaadayo mas’uuliyadeeda dagaalkaas. Waxuu sidoo kale sheegay in ay ka badbaadiyeen odayaal uu xirxiray wasiirka waa siduu hadalka u dhigaye, tuulada Shaatoolow.
Hadaan dib u milicsano sida ay wax ku bilowdeen, wasiir ku xigeenka Jubbaland Cabdirashiid Janan waxuu socdaal ugu maqnaa dalka dibadiisa, gaar ahaan magaalada Nairobi waxuuna markiisi hore ka ambabaxay magaalada Kismaayo oo uu muddo ku sugnaa.
Usbuuci la soo dhaafay ayuu safar dhanka dhulka ah ku soo galay, waxuuna ka soo galay degmada Beledxaawo. Xuduuda waxaa ku sugayay ciidamo ilaalo ah oo watay gawaari gaashaaman. Waxuu yimid degmada Beledxaawo oo uu kula kulmay maamulka iyo bulshada degmada. Ka dib waxuu u sii gudbay degmada Doolow oo iyadana uu uga sii gudbay tulooyin ku dhow dhow deegaanadaas si uu ugu kuurgalo xaaladda abaaraha iyo nolosha guud ee bulshada, maama uu yahay masuul ka tirsan wasaaradda arimaha gudaha Jubbaland.
Waxuu gaaray deegaanada Geedweyne oo ka tirsan degmada Doolow iyo Shaatoolow oo ka tirsan degmada Luuq. Sida ay sheegayaan dadka deegaanka qaarkood wasiirka wauu si degdeg ah dib ugu laabtay dhanka Doolow, ka dib marki uu ka war helay ciidamo ka soo baxay degmada Luuq, kuna soo wajahan deegaanka Shaatoolow oo uu xilligaas ku sugnaa, laakiin waxaa jira warar kale oo ka xoog badan oo isla dadka deegaanka ay tabinayaan oo sheegaya in wasiirka si caadi ah dib ugu laabtay ka dib marki uu si rasmi ah u gabagabeeyay booqashadiisa.
Waxay tahayba akhristow hadaan falanqeyno hadalada qaar ka soo fulay gudoomiyaha iyo waliba habka tabinta TV-ga Jubbaland waxaa jira dhaliilo badan.
1-Marka hore bulshada Jubbaland siiba gobolka Gedo xilligan uma baahna mas’uuliyiin iyaga isku mashquulsan, waxaana loo baahnaa in gudoomiyaha waxuu ka tirsanayo wasiirrka si hoose ugala xaajooda madaxda sare ee Jubbaland.
2-Dhanka kale Cabdirashiid Janan waa wasiir ka tirsan wasaaradda arimaha Gudaha waxuuna xaq u leeyahay in uu tuulo walba oo ka tirsan Jubbaland soo indha-indheeyo sababtoo ah waa masuuliyad saaran, gudoomiyaha Luuqna qodobkaas wuu ku khaldan yahay.
3-Gudoomiyaha waxuu shegay in uu ciidamo qaatay kuna duulay wasiirka, kana soo dhiciyay odayaal uu xirxiri rabay waa siduu hadalka u dhigay, hadiiba sheegashada gudoomiyaha loo raaco oo ay sax tahay, hadalkaas waxuu muujinayaa in khatar la geliyay nafta wiilal soomaaliyeed, wiilal Jubbaland, wiilal welibaba isku hal jifo ah, taasna waxaan dhihi karnaa gudoomiyaha wuu ku khaldanaa.
4-Dhanka kale gudoomiyaha degmada Doolow waa la yaqaanaa waa Aadan barre Cali waxaana la magac aabay ka dib marki Cabdirashiid loo magac aabay jagada wasiirnimada, hadaba gudoomiye Bishaar waxuu ku khaldan yahay in uu kala saari waayay tabasho uu wax ka tabanayo wasiirka oo uu xaq u yeelan karo, iyo ilaalinta protocolka dowladnimo.
5- Gudoomiyaha waxaa hadaladiisa ka mid ahaa “Shaatoolow iyo Geedweyne oo ka tirsan degmada Luuq” Deeegaanka Geedweyne kama tirsana Luuq ee waxuu ka tirsan yahay degmada Doolow, wax muran ahna kama taagna, sidaas darteed hadalka ka soo yeeray gudoomiyaha sax ma aha.
6- Gudoomiyaha degmada Luuq waxuu saadaaliyay dagaal dhici kara, taasoo ah arin aysan sinaba u maqli karin dhegaha shacabka Jubbaland, siiba gobolka Gedo oo dagaal ka soo daalay.
Hab-tabineedka Jubbaland TV sax ma aha!
1-Weriyaha warka soo diray waxuu aflagaadeeyay wasiirka oo uu ugu yeeray magac khaldan si ula kac ah.
2-Muuqaalka laga baahiyay TV-ga waxaa ku jira in ciidamada Jubbaland ee degmada Luuq iyo gudoomiyaha degmada u taagan yihiin suulinta waxyaabaha dhibaatada u keenaya bulshada isla markaana ay ceyriyeen ciidamo uu soo diray wasiir Cabdirashiid”, Suaasha waxay tahay wasiirku ma waxuu ku jiraa waxyaabaha dhibaatada ku ah bulshada ee laga suulinayo deegaanadaas? Qaabka hadalka loo dhigay ayaa saas ah, waaba hadii ay wax ka jiraan sheegashada gudoomiyaha!.
3-Waxaa kaloo muuqaalka ku jira muuqaalo iyo sawiro loo maleeynayo in la qaaday xilliyadii ay degmada Luuq ka socdeen arimaha dib u heshiisiinta iyo gaarsiinta maamulka Jubbaland, taasoo dhaaweyceysa kalsoonida daawadayaasha. Hoolka weyn ee ay dadka badan ka buuxaan kuma yaalo tuulooyinka la sheegay in uu booqday gudoomiyaha, TV-gana waxuu ka dhigay in muuqaaladani yihiin dadweynihi uu la soo kulmay gudoomiyaha.
Waxay tahayba bulshada waxay u baahan tahay nabad iyo xasilooni, umana baahna fara isku fiiq-fiiq xilligan weliba abaaraha adag lagu jiro.
1 Comment on Maqaal: Maxaa loo aflagaadeeyay wasiirka?
Haji // June 14, 2016 at 7:18 am // Reply
waa run hadalka gudoomiyaha
dameer janan kawaha yuu ka cararey